वान डे सिरिजः भारतले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
वान डे सिरिजः भारतले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौंः वेस्ट इन्डिज विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा भारतले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः१५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।
पहिलो खेल वर्षाका कारण रद्द भएकाले आज भारत–वेस्ट इन्डिजबीचकोे खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
आज विराट र गेलले पूरा गर्न सक्लान् यो कीर्तिमान?
बाँकी रहेका दुवै खेलमा जीत हासिल गरेर सिरिज जित्ने लक्ष्यमा रहेका भारत र वेस्ट इन्डिज विश्वकप २०१९ पनि पहिलो पटक वान डे श्रृंखला खेल्न लागेका हुन् । तीन खेलको टि–२० सिरिज ०–३ ले जीतेको भारत वान डे सिरिज पनि क्लिन स्विप गर्न चाहन्छ ।
भारतको प्लेइङ–११ः रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पन्त, केदार जाधव, रविन्द्र जडेजा, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी र कुलदीप यादव ।
वेस्ट इन्डिजको सम्भावित प्लेइङ–११ः इभन लुईस, क्रिस गेल, शाई होप, निकोलस पूरन, शिमरन हिटमायर, रोस्टन चेज, जसन होल्डर (कप्तान), कार्लोस ब्रार्थवेट, शेल्डन कट्रेल, ओशेन थोमस र केमार रोच।
याे पनि पढ्नुस वान डे सिरिजः विराट र गेल नयाँ कीर्तिमान नजितक, पूरा गर्न सक्लान् आज?
ट्याग्स: एकदिवसीय सिरिज, वेस्ट इन्डिज भर्सेस भारत